अन्तर्वार्ता • nepalhealthnews.com
– वर्षौदेखि निको नभएको घाउ लेजर विकिरण दिएको एक हप्तामा निको हुन थाल्छ । त्यही चीज शरीरका हरेक अंगमा लागु हुन्छ । लेजर विकिरणले साइडइफेक्ट गर्दैन भन्ने प्रमाणीत भइसक्दा पनि जनमानसमा अझै गलत धारणा छ । -शुरुमा
हरेक बर्ष एउटा जिल्लामा बाथरोग सेन्टर
अहिले बाथ पहिचानका लागि नेलफोल्ड क्यापिलरोस्कोपी टेष्ट स्थापना गरी सेवा दिन सकेका छौं । बाथले सुक्ष्म नशाहरुलाई पार्ने असर हेर्न यो टेष्ट महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस प्रविधिले बाथले नशालाई कति असर ग¥यो र नशाहरुको अवस्था के छ
कुनै पनि जिवन्त प्राणीबाट एक किसिमको तत्व निकालेर रोग विशेषमा प्रयोग गरेर समस्या हुन नदिने र भइसकेको समस्या न्यूनिकरणमा बायोलोजिकल एजेन्ट्स महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो भ्याक्सिन हो । लुपस बाथले फोक्सो, मिर्गाैलामा समस्या पारेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थाका
क्यान्सर बिरामीको मर्म बुझौं
नेपालमा कुन कुन क्यान्सर धेरै देखिने गरेको छ ? अहिले मुलुकमा मुख्य फोक्सोको क्यान्सरको समस्या धेरै देखिएको छ । महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । यसबाहेक पेट (आमाशय) को क्यान्सर, मुख
नेपाली औषधि विरुद्ध ठूलो आर्थिक चलखेल छ
नेपालको ठूलो राजनीतिक घरानाका उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो परिवारको पहिचान विस्तार गरे । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र नेपालको महिला आन्दोलनकी संस्थापक अगुवा साहना प्रधानका छोरा उमेशलालले भने राजनीतिक घरानाको परिचयलाई ब्यापारिक घरानामा बिस्तार गरे ।
मिर्गौला रोग खर्चिलो मात्र नभई झन्झटिलो र सुविधा नभएको ठाउँका लागि त मृत्यु बराबर नै हो । मिर्गौलाको रोग ज्यादै डरलाग्दो र खर्चिलो रोग हो । यसबाट बर्षेनी थुपै्र जनाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको र धेरैले दुःख पाइरहेका छन्
हामी बिरामीसँग दुःख साट्छौं
नेपालमा पहिलोपटक थ्री टेस्ला एमआरआई सेवा शुरु गरेपछि आम सर्वसाधारणले स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिबाट एडभान्सड डायग्नोस्टिक सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् । काडमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको यो सेवा जीवन्त एडभान्सड काठमाडौं इमेजिङ प्रा.लि. नामबाट सञ्चालित छ ।
स्वाइन फ्लु नियन्त्रणका लागि सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ? सबै मानिसमा यो कडा खालले प्रस्तुत हुँदैन । मानिसहरुमा सामान्य रुघाखोकीको रुपमा आउने जाने गर्छ । यसले खासै ठूलो असर गर्दैन । ५—७ दिनमा यो आफैं
अमेरिकाको जस्तो अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान गछौं
क्यान्सर लागेका बिरामीहरुले अहिले के कस्ता दुःख झेल्न बाद्य छन् ? छिमेकी मुलुक भारतमा निकै कठिनका साथ धेरै नेपालीहरु क्यान्सर उपचार गराउन बाद्य छन् । जस्तोः भारतको राजीब गान्धी क्यान्सर हस्पिटललगायतका धेरै क्यान्सर उपचार गर्ने अस्पताल आसपासमा